I-Cozy Cottage ene-Private Oak Orchard River Access - I-Airbnb
I-Cozy Cottage ene-Private Oak Orchard River Access
Waterport, New York, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Joshua
Siyakwamukela ku-Crooked Creek Property! Kuningi ongakuthanda ngaleli kotishi elithokomele khona e-Oak Orchard River. Zivumele ungene ngekhiphedi ye-Nest yobuchwepheshe obuphezulu futhi ujabulele ukugoqa okukhulu okubheke umfula i-Oak Orchard. Le ndawo ihlinzeka ngobumfihlo, futhi inikezela ngokufinyelela okuqondile eMfuleni ngendlela yangasese ehamba ngosebe lomfula. Jabulela isikhathi sakho emfudlaneni yokudoba, i-kayaking, isikebhe, ukubhukuda, noma ukujabulela ubuhle bemvelo.
Ikotishi linamagumbi okulala amabili, elokuqala linemibhede emibili, kanti elesibili linemibhede emibili. Indlu yokugezela ine-combo yobhavu/ishawa kanye neyunithi yokufudumeza ehlukile yasekuseni kubanda.
Ikotishi linekhishi elihlome kahle elinesitofu, isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha kanye ne-microwave. Jabulela igumbi lokuphumula elithokomele elijabulisa ngokusakaza bukhoma kwe-TV engu-42" LED smart TV (okuhlanganisa nabo bonke abantu basendaweni) nge-YouTube TV. Izivakashi zikhululekile ukungena ngemvume ezinsizakalweni zazo zokubhalisela ukusakaza imidlalo/amamuvi eziwuthandayo. Usofa omkhulu uhlala phakathi phambi kwesitofu esisha sokhuni futhi inikeza ukulala okuphelele kwesivakashi esengeziwe.
Amalineni ombhede, amathawula, ne-WiFi konke kufakiwe endaweni yakho yokuhlala. Ikhishi ligcwele izinto zokusebenza zansuku zonke, amabhodwe/amapani, nezitsha. Kukhona i-propane grill emphemeni ongemuva. Amabhodwe amalobster kanye nezishisi kuyatholakala uma ucelwa.
Ezinye izinsiza: iyunithi ekabili ehlinzeka ngokushisa nomoya, isitofu sezinkuni, izinkuni zomlilo, amanzi omphakathi, isistimu yezokuphepha.
Sicela usihlole ku-Facebook ngaphansi kwe-Crooked Creek Property!
I-Oak Orchard River iyimfihlo futhi inokuthula. Ngokufinyelela okuqondile emfuleni inkomishi ilungele i-kayaking, isikebhe, ukudoba, noma nje ukuphumula emphemeni noma idokhi yokudoba.
Kunezindawo zokudlela ezimbalwa ezihamba phambili ngaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10. Kukhona ama-wineries amaningana phakathi nemizuzu engu-20 ye-cottage. I-Buffalo, i-Niagara Falls, ne-Rochester konke kungaphakathi kwehora elingu-1 lokushayela.
Izivakashi zizoba nazo zonke izindlu zazo. Izivakashi zizonikezwa inombolo yocingo yabanikazi uma kukhona okudingekayo.